China 2020 New Intelligent Mini Insect Repellent Ultrasonic Intelligent Frequency ကူးပြောင်းခြင်းဒီဂျစ်တယ် Display ခြင်တွန်းလှန်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Jinjiang
2020 နယူး Intelligent Mini Insect Repellent Ultrasonic ထောက်လှမ်းရေးကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းဒီဂျစ်တယ် Display ခြင်တွန်းလှန်
ultrasonic ပိုးမွှား repeller သည်အဆင့်မြင့်အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၂ ~ ၆၅ KHZ မောင်းနှင်နှုန်းကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ultrasonic လှိုင်းသည် endocrine စနစ်နှင့်ခြင်များ၊ ပိုးဟပ်များ၊ ကြွက်များ၊ mites နှင့်ထုတ်လုပ်သည့်လှိုင်းကြိမ်နှုန်းမြင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ultrasonic circuit ကိုလက်ခံသည်။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအရဤအကြိမ်ရေအတွင်းရှိအခြားပိုးမွှားများသည်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာချက်များအရပိုးမွှားများကိုမောင်းနှင်ရန်နှင့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Ultrasonic လှိုင်းများသည်လူသားများနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၂၀KHZ ပိုလျှံသော Sonic လှိုင်းသည်လူတို့မကြားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်၏ဖော်ပြချက်: ultrasonic ပိုးမွှား repeller ဆိုသည်မှာအဆင့်မြင့်နည်းပညာအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခြင်များ၊ ပိုးဟပ်များ၊ ပိုးဟပ်များ၏ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်မှုပြdisနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ၂၂ ~ ၆၅ KHZ မောင်းနှင်နှုန်းကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ultrasonic လှိုင်းအားထုတ်လုပ်ရန်လှိုင်းကြိမ်နှုန်းမြင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ultrasonic ပတ်လမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာချက်များအရကြွက်များ၊ ပိုးမွှားများနှင့်အခြားပိုးမွှားများသည်ဤကြိမ်နှုန်း၏ပြင်းထန်သောအကွာအဝေးအတွင်းရှိပိုးမွှားများကိုမောင်းနှင်ရန်နှင့်သတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ Ultrasonic လှိုင်းများသည်လူသားများနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
၎င်း၏လုံခြုံမှု၊ အဆိပ်မရှိသော၊ အရသာ မရှိ၍ မြင့်မားသောထိရောက်မှုကြောင့်၎င်းကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သိုလှောင်ရုံများ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဆေးရုံများ၊ ရုံးခန်းများ၊ စက်ခန်းများ၊ ဥယျာဉ်များ၊ ဟိုတယ်စပါးသိုလှောင်ရုံများစသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ထိရောက်သောထုတ်ကုန်: ၆၀-၁၀၀ စတုရန်းမီတာ၊ အကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ ၆၀ စတုရန်းမီတာနှင့်တစ်ခုစီအတွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် 5-8W ဖြစ်သည်
1. မြေပြင်မှ ၂၀-၈၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးရှိနံရံပေါ်ရှိ power socket ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားရမည်။ (အိမ်အလှဆင်စဉ်အတွင်းတပ်ဆင်ထားသည့်ပါဝါ socket သည်ဤအမြင့်တွင်အမြဲတမ်းရှိနေသည်)၊ မြေပြင်ပေါ်တွင် perpendicular ဆက်နေရန်။ ထုတ်ကုန်မြေပေါ်မှာပြားချပ်ချပ်ချထားခြင်းကိုမရနိုင်သည်ကို။ ဤအမြင့်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမပါရှိပါကထုတ်ကုန်ကိုဤအမြင့်နှင့်မြေပြင်အနေအထားတွင်ထိန်းသိမ်းထားရန်ပြင်ပ patch board တစ်ခုလိုအပ်သည်။
၂။ ကုန်ပစ္စည်း၏ရှေ့ဘက်မှ ၁ မီတာအတွင်းအမြင့်မားသောအတားအဆီးများမရှိရ (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုရေခဲသေတ္တာ၊ ဗီရို၊ ဆိုဖာနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများ၏နောက်ဖက်တွင်တပ်ဆင်။ မရပါ) ။
၃။ ထုတ်ကုန်သည်အခန်းအတွင်းအတော်အတန်ပွင့်လင်းသောနေရာနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်းတံခါး (သို့) ၀ င်းဒိုးသည်ကြာမြင့်စွာမဖွင့်သင့်ပါ။ (ultrasonic wave သည် straight line တွင်ပြန့်သွားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုအိမ်ပြင်တွင်ပျံ့နှံ့စေနိုင်သဖြင့်မိုးလုံလေလုံလှိုင်းကွင်း၏ပြင်းထန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်) ကြွက်ထိန်းချုပ်မှု၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချ။
4. ကုန်ပစ္စည်းများသည်ကုလားကာအ ၀ တ်နှင့်အခြားအထည်အ ၀ တ်များကိုဖြစ်နိုင်သမျှဝေးဝေးရှောင်သင့်သည် (အထည်များသည် ultrasonic လှိုင်းကိုစုပ်ယူနိုင်သည်) ။
၅။ ထုတ်ကုန်ကိုပထမဆုံးသောကြွက်မထိမှန်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်သင့်သည်။ ဤဒေသရှိကြွက်များအားဖယ်ရှားလိုက်သောအခါထုတ်ကုန်ကိုအိမ်၏အလယ်ဗဟိုအနေအထား (ထိုင်ခုံအခန်းကဲ့သို့) သို့မဟုတ်မောက်စ်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနေရာတွင်တပ်ဆင်ပါ။
6.The ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်း 24 နာရီစဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ရကြလိမ့်မည်။
၁။ ultrasonic လှိုင်းဆိုတာဘာလဲ။
အဖြေ - တုန်ခါသောအခါအရာဝတ္ထုသည်အသံကိုဖြစ်စေသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်စက္ကန့်လျှင်တုန်ခါမှုအရေအတွက်ကို Hertz ရှိအသံကြိမ်နှုန်းဟုခေါ်ကြသည်။ အရာဝတ္ထုသည်သတ်မှတ်ထားသောကြိမ်နှုန်းထက် ကျော်လွန်၍ တုန်ခါသောအခါလူတို့၏ကြားနိုင်စွမ်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအခါလူတို့သည်၎င်းကိုမကြားနိုင်တော့ပါ၊ ထိုအသံလှိုင်းများကို ultrasonic လှိုင်းများဟုခေါ်သည်။ လူ့နားများ၏အာရုံအကွာအဝေး 16HZ နှင့် 20KHZ အကြားဖြစ်ပါတယ်။ ultrasonic အသံများသည်လူတို့၏အသံကိုနားမလည်နိုင်သော်လည်းတိရိစ္ဆာန်များစွာတွင်၎င်းစွမ်းရည်ရှိသည်။ အစားအစာများကိုခြေရာခံရန်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်လင်းနို့များသည် ၂၀၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀၀ HZ ကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရွေ့လျားသော“ ရေဒါဘူတာ” ကဲ့သို့လင်းနို့များသည်ဤ“ ရေဒါ” ကို အသုံးပြု၍ ပစ်မှတ်များကိုရှာဖွေ။ အင်းဆက်ပိုးများကိုဖမ်းဆီးနိုင်သည်။ လူသားတွေဟာ ultrasonic လှိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ရေ၌ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုရှာဖွေရန် "sonar" ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပြည်နယ်များဖြစ်သောရေငုပ်သင်္ဘောများ၏အနေအထားဖြစ်သည်။ ultrasonic လှိုင်းသည်အတားအဆီးများကိုမထိုးဖောက်နိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်ခိုင်မာသောညွှန်ပြမှု၊ တိုတောင်းသောပျံ့နှံ့မှုအကွာအဝေး၊ အမြန် attenuation စသည်တို့ကဲ့သို့သောလက္ခဏာများရှိသည်။ ultrasonic လှိုင်း၏ပြန့်ပွားမှုကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မရေမတွက်နိုင်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုနေရာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံရန်။ (ကိုးကားစရာ - အသံသဘာဝ)
၂။ အကယ်၍ mouse repeller ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုခဲ့လျှင်၊ ဒါအလုပ်မလုပ်ဘူးလား
အဖြေ - အမှတ်။ ဤထုတ်ကုန်မှထုတ်လုပ်သည့်မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာအလိုအလျောက်မောင်းနှင်သည့်ကြိမ်နှုန်းသည်အဆက်မပြတ်နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ကြွက်များနှင့်အခြားပိုးမွှားများသည်“ အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်း” နှင့်သတ်မှတ်ထားသောကြိမ်နှုန်းသို့“ ခုခံကာကွယ်မှု” မဖြစ်စေရန်။
3. Ultrasonic ကြွက် repeller ကဘာလဲ?
အဖြေ: Ultrasonic ကြွက် repeller သည် 20khz-55khz ultrasonic wave ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့် acoustic pulse circuit ကိုနည်းပညာနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြွက်များ၏အာရုံဆိုင်ရာသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာမှထုတ်လုပ်သော ultrasonic လှိုင်းသည်ကြွက်များ၏အာရုံစနစ်ကိုထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးကြွက်များ၏ဇီဝကမ္မကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤနည်းပညာကိုဥရောပနှင့်အမေရိကရှိအဆင့်မြင့်ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ခြင်းသဘောတရားများမှလာသည်။ ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြွက်နှင့်ပိုးမွှားများမပါ ၀ င်သောအရည်အသွေးမြင့်အာကာသတစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပြီးကြွက်နှင့်အခြားပိုးမွှားများမနေထိုင်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရန်၊ ၎င်းတို့အားအလိုအလျောက်ပြောင်းရွှေ့ရန်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း၊ ကြွက်နှင့်ပိုးမွှားပပျောက်ရေး။
အဖြေ: ကြွက်များ၊ လင်းနို့များကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်များသည် ultrasound မှတဆင့်ဆက်သွယ်ကြသည်။ ကြွက်များတွင်အလွန်အမင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးသောအာရုံစနစ်များရှိပြီး ultrasonic အသံများကိုအထိခိုက်မခံသော၊ မှောင်မိုက်နေသောအသံများ၏အရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ 30-50 KHZ ultrasound ကြားလျှင်ကြွက်ငယ်များသည်သူတို့၏မျက်စိကိုမဖွင့်မီ ultrasound နှင့်ပဲ့တင်သံထုတ်ခြင်းဖြင့်အသိုက်သို့ပြန်သွားနိုင်သည် (နိုင်ငံခြားကိုးကားချက် - Allin နှင့် anks1971; Carden and Hofer 1992) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကြွက်များပြcrisisနာကြုံတွေ့ရပါကသူတို့သည် ultrasonic အသံထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်အကူအညီတောင်းနိုင်သည်။ သူတို့သည်မိတ်လိုက်စဉ်အတွင်းပျော်ရွှင်မှုကိုဖော်ပြရန် ultrasonic လှိုင်းများကိုလည်းပေးပို့နိုင်သည်။ Ultrasonic အသံသည်ကြွက်များကြားတွင်ဘာသာစကားဖြစ်သည် (နိုင်ငံခြားကိုးကားချက် - Fay 1988, Warfield 1973 နှင့် Nature of Sound) ။ ထို့ကြောင့်စွမ်းအားအလွန်မြင့်မားသော ultrasound သည်ကြွက်၏အာရုံစနစ်ကိုထိရောက်စွာဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်မခံနိုင်လောက်အောင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ မှိုင်း။ တက်ခြင်းနှင့်အခြားလက္ခဏာများခံစားရခြင်းကြောင့်ကြွက်များကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုနယ်ပယ်မှထုတ်ပယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အဖြေ: အောက်ပါဖြစ်နိုင်ချေများသည်အသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ပထမအချက်မှာကုန်ပစ္စည်းများ၊ အခန်းကန့်နံရံများသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများ (အတားအဆီး) ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းထိန်းချုပ်မှုinရိယာတွင်အရာဝတ္ထုများ၏သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း (သို့) ကုန်စည်များကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်သိုလှောင်ထားခြင်း (သို့) ထောင့်များ၊ အခန်းကန့်နံရံများစသဖြင့်များပြားလွန်းပါကထိုကဲ့သို့သောပတ် ၀ န်းကျင်သည်ကြွက်တွန်းလှန်သူအရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေသင့်သည်။ - စွမ်းအင်ကို Ultrasonic လွှမ်းခြုံကြွက်ထိန်းချုပ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကကြွက်တွန်းလှည်းကိုနေရာချထားခြင်းနှင့်လည်းများစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကြွက်တွန်းလှည်း၏အနေအထားသည်မကောင်းပါ။ ထင်ဟပ်သောမျက်နှာပြင်သည်ကြွက်တွန်းလှန်သူ၏ထိရောက်မှုကိုလည်းအားနည်းစေနိုင်သည်။ သင့်ကြွက်ကိုတွန်းလှန်ရောင်ပြန်ဟပ်သောရောင်ခြည်များဖြစ်ပေါ်စေသောနေရာတွင်တတ်နိုင်သမျှထားပါ။ တတိယအချက်မှာကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်နေရာများလွန်းခြင်း၊ ကြွက် repeller ထုတ်ကုန်အရေအတွက်မလုံလောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနယ်ပယ်ကိုအပြည့်အ ၀ မဖုံးအုပ်နိုင်ပါကကြွက်ထိန်းချုပ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်စံနမူနာမဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကြွက်တွန်းလှန်သူအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်သင့်ပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်အတွက် ultrasonic တိုက်ခိုက်မှုသိပ်သည်းဆကိုတိုးမြှင့်သင့်သည်။
အဖြေ: ဖြစ်နိုင်သမျှဝေးကွာသောကြွက် repeller ၏ ultrasonic port ကိုအခန်းအတွင်းရှိအတော်အတန်ပွင့်လင်းသောနေရာတွင်တွေ့သင့်သည်။ ultrasound မှတားဆီးရန်နှစ်ခုသို့မဟုတ်ရှေ့မီ (သို့) တံခါးသို့သို့မဟုတ် ၀ င်းဒိုးသို့တိုက်ရိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်ပြတင်းပေါက်ထဲကပေးပို့ခြင်း။ ဤကိရိယာတွင်ရေစိုခံသောလုပ်ဆောင်ချက်မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကော်ဇောသို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းသောဆောင်းပါးနှင့်နီးစပ်သောနေရာဖြစ်သောစိုစွတ်သောနေရာတွင်မထားသင့်ပါ။ ကြွက်နှင့်ပိုးဟပ်ကဲ့သို့သောပိုးမွှားများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်အိမ်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသန့်ရှင်းစွာထားရန်နှင့်ပိုးမွှားများ၏အစာအရင်းအမြစ်ကိုဖြတ်တောက်ပါ။ ဤစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်ကျေနပ်လောက်သောရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်။ ကြွက်များကိုသွေးဆောင်ရန်အစားအစာကိုမသုံးပါနှင့်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မင်းရဲ့အရင်ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးဖြုန်းတီးပစ်လိုက်တယ်။ ၎င်းကိုစားသောက်ဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့်ပိုးမွှားများစားနပ်ရိက္ခာပေါများသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုသောအခါအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးပွားစေရန်ပိုးမွှားများ၏ပြင်းထန်မှုအရကြွက်တွန်းလှန်သူအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်သင့်သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည်အတားအဆီးမရှိဘဲပွင့်လင်းသောနေရာတွင်တိုင်းတာသည့်လွှမ်းခြုံနေရာကိုရည်ညွှန်းသည်။ အထူးအသုံးပြုရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ဦး စွာဆက်သွယ်ပါ။ အသုံးပြုမှုအစောပိုင်းကာလများတွင်ကြွက်များနှင့်ပိုးဟပ်များသည်ပိုမိုတက်ကြွလာကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သာမန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ထိတ်လန့်စရာမလိုပါ။ အသုံးပြုမှုအစောပိုင်းကာလတွင်မှောင်မိုက်ထဲတွင်ပုန်းရှောင်လေ့ရှိသည့်ကြွက်များနှင့်ပိုးမွှားများသည်စွမ်းအားအလွန်မြင့်မားသော ultrasonic လှိုင်း၏တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံရပ်နိုင်သောကြောင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လွတ်မြောက်လိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင် mouse ကိုကော်ထောင်ခြင်း၊ ကြွက်များအားပိုးသတ်ဆေး၊ ပိုးဟပ်လူသတ်သမားနှင့်ပိုးဟပ်အိမ်တို့ကိုတွဲဖက်သုံးနိုင်လျှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းလိမ့်မည်။
၇။ ကြွက်များနှင့်အဆိပ်များသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မည်မျှကြာအောင်တွန်းလှန်ကြသနည်း။
အဖြေ - ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်မှ ၆ ပတ်ကြာသင့်လျော်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်းသည်ရလဒ်များကိုစတင်ပြသသောအခါကြွက်၊ ပိုးမွှားများနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များအရေအတွက်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။
ရှေ့သို့ ရုံးဆေးရုံအတွက်စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့်အတူလေသန့်ရှင်းရေး Revitalizer အိတ်ဆောင်အိမ် Air လေသန့်ရှင်းစက် Anion အိုဇုနျး Air Purifier
နောက်တစ်ခု: Ultrasonic ပိုးမွှား Repeller, အီလက်ထရောနစ် Plug-in ကိုကြွက်တွန်းလှန် bug တွေပိုးဟပ်ခြင်ပိုးမွှား Repeller
2018 အသစ်ထုတ်ကုန်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမှဲ့တွန်းလှန် S ...
စက်ရုံထောက်ပံ့ရေးအတွက် 2020 ultrasonic အီလက်ထရွန်အတွက် plug ...